Etu esi wụnye keyboard Lollipop nke Xperia Z3 | Gam akporosis
Ibudata ma wụnye keyboard Z3 Lollipop Xperia
Taa, achọrọ m ịkọrọ gị niile, na-ekelekwa ọzọ maka nzukọ mmepe Android na-enweghị atụ Ndị na-emepụta XDA, ụzọ ibudata ma wụnye keyboard Z3 Lollipop Xperia na ụdị ọ bụla nke ọnụ ọnụ gam akporo n'agbanyeghị na ọ na-eme na ihe nlereanya.
Nanị ọnọdụ nke a ga-emerịrị bụ na njedebe ga-adị gbanye mgbọrọgwụ ma nwee ụdị nke gam akporo 4.0 ma ọ bụ nsụgharị dị elu. Ya mere ugbu a na ị maara, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịnụ ụtọ Xperia Z3 nanị keyboard Na mbipute ya ma ọ bụ melite ya na Lollipop, m na-adụ gị ọdụ ka ị gaa n'ihu na-agụ ọkwa a ebe m na-akọwa usoro ziri ezi iji budata ma wụnye dabere na ụdị gam akporo ị wụnye.
Ọ ga-kwuru, tupu ịmalite na nkuzi nke wụnye Xperia Z3 Lollipop keyboard, na nsụgharị maka gam akporo Lollipop na-arụ ọrụ zuru oke na njedebe ọ bụla gam akporo, ọ bụ ezie mbipute nke gam akporo 4 na-aga n'ihu bụ nke mere nyocha anyị amaghịkwa ebe ndị ọ ga-arụ ọrụ ma ọ bụ ebe ọnụ ahịa ga-adị nsogbu.
1 Download faịlụ ndị dị mkpa
2 Usoro nwụnye maka gam akporo 4.0 gaa n'ihu belụsọ Roms Lollipop
3 Usoro nwụnye maka Roms Lollipop
Download faịlụ ndị dị mkpa
N'ihi na gam akporo 4 n'ihu pịa ebe a.
Maka gam akporo Lollipop pịa ebe a.
Ozugbo ebudatara faịlụ ZIP dị ka ụdị gam akporo anyị si dị, anyị ga-adọpụ faịlụ ahụ yana faịlị dapụtara anyị ga - eme ihe ndị a mgbe niile site na a Mgbọrọgwụ file Explorer.
Usoro nwụnye maka gam akporo 4.0 gaa n'ihu belụsọ Roms Lollipop
Detuo ederede textinput-tng.apk na uzo sistemụ / ngwa
Detuo faịlụ libswiftkeysdk-java.so na ụzọ usoro / lib
Buru n'uche na ozugbo e depụtaghachiri faịlụ ndị ahụ, site na otu onye na-enyocha faịlụ Mgbọrọgwụ anyị ga-agbanwe ikikere ma hapụ ha dị ka njide ejikọtara a:
Ikike maka folda ahụ
Ikike maka faịlụ ọ bụla
Mgbe ahụ anyị ga-enwe naanị nke ahụ reboot ngwaọrụ inwe ike ịnụ ụtọ ihe a na-akpali akpali Xperia Z3 Lollipop kiiboodu.
Usoro nwụnye maka Roms Lollipop
Detuo ederede ederede-tng n'ime sistemụ / ngwa
Nye ya otu ikikere dị ka nseta ihuenyo dị n'elu na reboot ngwaọrụ.
Ugbu a ị ga-arụnye ụdị ọhụrụ a nke Lollipop kiiboodu nke Xperia Z3 na ihe ọ bụla gam akporo ọnụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo nsụgharị » Ibudata ma wụnye keyboard Z3 Lollipop Xperia
arụghị ọrụ na Galaxy S4 na ngwaahịa kat kat
Zaghachi Yoav Ramos
juinior obodo dijo
Ebudatara m ya, m nyefere ya kọmputa m Alcatel pop c7 na folda m niile ka emere ụzọ ọ bụla, ihe niile furu efu, na folda ahụ TRASH pụtara mana enweghị m ike ịgbake ya mgbe m idetuo folda ma mado ya ọ na - emepụta ụzọ. Chekwaa folda izizi ahụ na folda TRASH ọzọ. Biko ị nwere ike ị nyere m aka. Nke a malitere mgbe m nwara ịwụnye keyboard a mgbe m budịrị ya.
Zaghachi juinior villa
Anaghị arụ ọrụ na s3 i9300 na lollipop
Ọ na-arụ ọrụ zuru oke na G3 na KK.
Ọ rụrụ ọrụ na Moto X Play, daalụ nke ukwuu 😉
Usoro PEGI nke ogo afọ na nyocha ngwa ngwa na-abịa Google Play